रिलेसनसिपमा होइन, इलेक्सनसिपमा बिजी छुः सुनिता डंगोल – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/रिलेसनसिपमा होइन, इलेक्सनसिपमा बिजी छुः सुनिता डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौंको भावी उपमेयरको दौडमा अगाडि बढेसँगै सुनिता डंगोलका विषयमा जनचासो ह्वात्तै बढेको छ । मिडियाले उनको निजी जीवनका विषयमा पनि निकै खोजीनीति गर्न थालेका छन् । तर, यही क्रममा कतिपय फेक न्यूजहरूले उनलाई दु:ख दिइरहेको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको समाचार हो- सुनिताले मंसिरमा बिहे गर्दैछिन् । केही समाचारमा त उनको भावी श्रीमान्‌को नाम र परिचयसमेत दिइएको छ । उनीहरू रिलेसनसिपमा रहेको र विवाहका लागि चाँजोपाँजो मिलाइरहेको दाबी समाचारमा गरिएको छ ।
हामीले उनैलाई सोध्यौँ, ‘मंसिरमा भोज खुवाउन लाग्नुभएको हो ?’लामो हाँसोसहित सुनिताले जवाफ दिइन्, ‘म त हैरान भइसकेँ जवाफ दिँदादिँदा । मेरो बिहे हुँदैछ भन्ने मैले पनि समाचारमा पढेर थाहा पाएको हुँ । खोइ कहाँबाट, कसलाई सोधेर समाचार लेखिएको हो ?’
सुनितालाई देश-विदेशबाट फोन र म्यासेजमा कैयौंले विवाहबारे सोधिरहेका छन् । परिवारसमेत चकित परेको उनले सुनाइन् ।‘अस्तिसम्म मंसिर भन्ने थियो रे फेरि जेठमै भन्ने आयो भनेर आफन्तले सुनाइरहेका छन्,’ सुनिताले भनिन् ।यद्यपि उनको यसमा ठूलो गुनासो भने छैन ।आफैंलाई सान्त्वना दिँदै भनिन्, ‘यो सबै मप्रतिको माया र सद्भावकै कारण हो जस्तो लाग्छ । नकारात्मकरूपमा लिएकी छैन ।’
उपमेयरको उम्मेदवार बनेदेखि नै फेसबुकदेखि टिकटकसम्म भाइरल बनेकी छिन् सुनिता । काठमाडौंको मतगणनामा अग्रस्थान कायम गरेसँगै उनको लोकप्रियताको ग्राफ उकालो लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उनलाई निकै सकारात्मक कमेन्टहरू आइरहेका छन् । टिकटकमा कतिपय युवाहरूले उनको सौन्दर्य र मुस्कानको प्रशंसा गर्दै ‘नेसनल क्रस’ संज्ञा दिएका छन् ।
त्यसो त सुनिताको विवाहको उमेर भइसकेको छ । के उनी कसैसँग रिलेसनसिपमा छिन् ? उनका प्रशंसकहरूलाई चासो हुन सक्छ ? यो चासो पनि उनले निवारण गरिदिइन् ।‘त्यस्तो केही पनि छैन । म अहिले रिलेसनसीपमा होइन इलेक्सनसिपमा नै बिजी छु,’ उनले भनिन् ।नेपाल प्रेस